Maalinta: Sebtember 24, 2018
Khadka Gaadhiga Cable Ordu Boztepe ee Dayactirka ah
Khadka Gawaarida Cayrta ee Ordu Boztepe wuxuu ku hoos jiraa Dayactir: Xariga gawaarida fiilada, oo ay maamusho shirkadda ORBEL A.Ş., oo ah shirkad hoos timaad degmada Ordu iyo inay bixiso gaadiid u dhexeeya Altınordu iyo Boztepe, waxay ku jiraan dayactir saacadaha hawlgalka ee 1.500. ILAAHAY 24.09.2018 [More ...]
Mashruucyada Aragga ee ku Saabsan Antalya
Menderes Türel, Duqa Magaalada Caasimadda, wuxuu Antalya ka dhigayaa magaalo sumad leh oo leh mashruucyo aragti. Iyada oo ay ka socdaan mashruucyo kala duwan oo ka socda Boğaçay Project, Konyaaltı Beach, Cruise Port iyo Tünektepe Project, Antalya waxay kalsooni ku qabtaa waddo ay ku noqonayso xiddigta adduunka. [More ...]
Karakurt, Turkey waa ugu horeysay ee Turkish Republic Tareennada State tareen soo saaray shirkadda of Tulomsas. 1958, Eskişehir Drame Frame Workshop waxaa loo habeeyay bartilmaameedyo cusub iyo waa weyn oo hoos imanaya Warshadda Eskişehir Railway. this [More ...]
Innotrans oo leh xubinada ARUS ee 2018 Fair
Innotrans 17-22, labada sano ee Yurub tikniyoolajiyada gaadiidka caalamiga, nidaamyada iyo carwada carwada, waxaa lagu qabtay bishii Sebtember Berlin, Jarmalka. InnoTrans 2018 teknolojiyada tareenka, kaabayaasha, tunnel [More ...]
TEKNOSAB waxay hogaamin doontaa kobcinta tiknoolajiyada horumarsan
Gudoomiyaha BTSO İbrahim Burkay ayaa la kulmay gudoomiyaha gobolka İzzettin Küçük iyo wafdiga ganacsatada ee TEKNASOB iyo xubnaha kaqeyb galaya ee gobolka. "TEKNOSAB [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa bisha Oktoobar ka furmi doona garoonka caalamiga ah ee 29 ee magaalada Istanbul, aragtida u dhaxeysa eber, xitaa xaaladaha cimilada oo hooseysa, diyaaradaha ayaa si habsami leh u soo degi kara. [More ...]
Khadka EGO si madaxbanaan
Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna, Akyurt'ta iyada oo ku eg baaxadda booqashooyinka toddobaadlaha ah ee degmada oo booqanaya Autonomi, waxay la kulmeen farshaxan-yahannada ku jira buugga. MASFED iyo Guddoomiyaha Aladın Erkoç [More ...]
IGA waxay aqbashay dareenka madaarka saddexaad
Xaaladaha shaqo ee dhismaha garoonka saddexaad ee 'way xumaa in la abuuro halis naf-gooyo ah', iyo "IGA" oo ay asaasay iskaashi ka kooban shan shirkadood, ayaa oggolaaday. Seyhan Avşar oo ka socda Jamhuuriyadda, Mehmet Salmazzem, 3 [More ...]
Line Tareenka Xawaaraha Sare ee Laga Furay Hong Kong Shiinaha
Qeybta Hong Kong ee isku xirka tareenka Guangcou-Sincin-Hong Kong, oo jartey safarka ka tagga caasimada Shiinaha ee Beijing illaa Hong Kong sagaal saacadood, ayaa lagu dhawaaqay shalay. Adeegga tareenka degdega ah ee isku xira Hong Kong iyo Shiinaha [More ...]
Warbixinta Kocaeli ee UEFA: Madaarka Kocaeli oo aan ku filneyn UEF
dalalka musharax EURO 2024 Turkey, kaas oo sidoo kale muujisay kulan ay la ciyaari doonaa garoomada in Kocaeli, Turkey. Warbixinta UEFA, macluumaad aan ku filneyn ayaa lagu soo daray garoonka diyaaradaha ee Kocaeli. EURO 2024 Report Qiimaynta si aad u hesho in dhibban Turkey [More ...]
Duqa Magaalada Adana Magaalo Weyn Hüseyin Oral wuxuu dhigay mashruuc libaax leh mid mid inuu gacan ka geysto xalinta dhibaatada gaadiidka Magaalada oo KOOBAN XAALADA SADDEXAAD SANADKA SANADKA Qarniga soo socda ee Adana ayaa la dhisay [More ...]
Khadadka waxaa la bilaabay in lagu rakibo 25 kiiloomitir 3 Wajiga Wejiga Mashiinka inta udhaxeysa Varsak iyo Zerdalilik, kaas oo ku socday xawaare aad u sareeya. Wejiga koowaad ee mashruuca u dhexeeya Varsak-Otogar ayaa la qorsheeyay in la dhammeeyo bisha Diseembar. Antalya waqtiga ugu casrisan [More ...]
Ma jiraan diiwaanada qarsoodiga ah ee 24.09.2018 ee nidaamkayaga.
Dib-u-Xoojinta Labada Gaadiidka Gacanka
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay qaadeysaa labo markab oo rakaab ah oo dheeri ah si ay u xoojiso gadiidka xamuulka uguna yaraato taraafikada wadada. Marka lagu daro markabka heerka sare ee 15 markab markab xamuul, xNUMX markab rakaab ah oo rakaab ah [More ...]